Fitokanana ny "Centre spécial d'aguerrissement opérationnel" Beroroha | Primature
Fitokanana ny “Centre spécial d’aguerrissement opérationnel” Beroroha
Mahazoarivo, 19 oktobra 2020 – “Tsy ekena intsony ny hisian’ny distrika ho latsa-danja amin’ny fametrahana fandriampahalemana sy amin’ny fampandrosoana amin’ny ankapobeny” ; io no anisan’ny nasongadin’ny Praiministra Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian, tamin’ny kabariny, raha nitokana ny toby “Centre spécial d’aguerrissement opérationnel”tany Beroroha, faritra Atsimo andrefana androany. Fitokanana, izay nambarany fa mariky ny firosoana amin’ny paikady entina hampandrosoana sy hiadiana amin’ny tsy fandriampahalemana
Miaina ao anaty tsy Fandriampahalemana rahateo i Madagasikara, hoy hatrany ny Lehiben’ny governemanta, ary velirano voalohan’ ny Filoham-pirenena, ny famerenana ao anatin’ny fotoana fohy ny Fandriampahalemana eto amin’ny tany sy ny fanjakana. Koa, nanolotra fisaorana manokana ny teo anivon’ny Zandarimariam-pirenena, noho izao fahavitan’ny fotodrafitrasa izao, ny Praiministra, izay nilaza fa fitaovana fotsiny ny fotodrafitrasa, fa ao ambadik’ izany dia misy ny finiavana hiarovana ny vahoaka. Noho izany, dia ilaina ny mandamina ny fomba fiasa mba hisitrahan’ny vahoaka ny Fandriampahalemana.
Eo amin’izay lafiny fandriampahalemana izay ihany dia, nambaran’ny Praiminisitra fa hanomboka tsy ho ela ny asa fananganana ny “Commissariat de Police”, ary hametrahana Fitsarana ambaratonga voalohany sy hanorenana fonja ao Beroroha. Nampanantena ihany koa izy, fa hotendrena ato ho ato ny lehiben’ny distrika ary hampitaovana fiara ny distrika.
Tamin’ity fotoana nihaonany tamin’ny vahoakan’I Beroroha ity koa no nanamafisany fa mpiasam-bahoaka ny mpiasam-panjakana ka amin’ izao fanovana rafitra sy tanjona izao dia mila mpiasam-panjakana moderina ny firenena, tokony ho eo akaikin’ny vahoaka lalandava, ary ialàna ny tsolotra sy ny fanaovana tandrevaka, ka mba ho mpiasam-panjakana hentitra, mahay ny asany ary manaja ny rariny sy ny hitsiny amin’ny fanatanterahana ny asany. Izay no hahafahana mamerina ny fitokisan’ny vahoaka amin’ny fitondrana amin’ny ankapobeny araka ny nambaran’ny Lehiben’ny governemanta hatrany.
Ho an’ny faritra Atsimo andrefana manokana, eo amin’ny lafiny fampandrosoana, dia tsara, hoy ny Praiministra, raha ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny no mijery ireo zavatra azo trandrahina (potentiels) amin’ny toerana iray, ka hampandeha tsara ny asa fampandrosoana any amin’iny faritra iny.
Manara-dia ny Lehiben’ny governemanta mandritra izao fitsidiham-paritra arahin’asa izao, ny Minisitry ny Fiarovam-pirenena sy ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena.
Marihina fa tahaka ny fanaon’ny delegasiona izay tarihin’ny Praiminisitra rehefa midina ifotony tahaka izao, dia nisy ny fivoriana niarahana tamin’ireo tompon’andraikitra (governoran’ny Faritra Atsimo andrefana, solombavam-bahoaka, ben’ny tanana, sns…) isan-tsokajiny ka nandinihana sy nifanakalozana mikasika ireo hetaheta sy ny filàn’ny mponina, ary ny paika entina mampandroso ny faritra notsidihana.
← Conseil du gouvernement du Mercredi 07 Octobre 2020
Fitsidihana arak’asa tao Ankazoabo →
Réunion du CNGRC
Fivoriana ho fandrindrana ny fifamoivoizana eto Antananarivo